Iindaba -Yintoni i-tanker subsea valve
Itanki Trailer Izahlulo
Iadaptha yeDrop ye-API
Uthuli Cap Cap
Ukubuyisa iVapor Vent & Valve
I-Valve yokujonga i-Angle
Yintoni itanki yokuhamba kolwandle
Ivaluva zetanki zangaphantsi kolwandle zikwabizwa ngokuba ziipneumatic valves, i-pneumatic subsea valves, valves kaxakeka, kunye nezivalo zongxamiseko zokuvala. Kuba zazininzi izantya ezikhuselekileyo kunye nokhuseleko kwitonela iingozi zezithuthi eziyingozi e-China e-2014, amasebe aseburhulumenteni afanelekileyo aqinisile ukubekwa kweliso kubavelisi bezithuthi zetanki ezifana neetanki zeoyile, kunye ne-GB 18564.1 ekhutshwe yiKomitana yoPapasho lweSixhobo soPapasho lweSelfowuni. IKomiti yokuHanjiswa kweMikhumbi －2006 “Izithuthi zeetanki zothutho ezindleleni zeempahla eziyingozi kulwelo iCandelo 1: Iimfuno zobuchwephesha kwiitanki zetshiphu zasemoyeni” icacisa gca ukuba iivalvu zovalo olungxamisekileyo kufuneka zifakwe emazantsi etanki zothutho ezindleleni lweempahla eziyingozi ezingamanzi.
Isivalo sangaphantsi kolwandle asiyomjelo nje esetyenziselwa ukulayisha nokukhuphela ioyile, kodwa ikwangumbindi wecandelo olawula ukuphuma nokucima isekethe yeoyile. Iqulathe ikakhulu iqokobhe, indlela yokutywina, indlela yolawulo, itanki yoqhagamshelo esisangqa kunye esisangqa esisangqa. Indlela yokutywina ifakwe kumzimba wetanki ngexesha lofakelo kwaye idityaniswe kwipleyiti esezantsi yetanki ngokusebenzisa itanki yoqhagamshelo esisangqa; Isixhobo sisebenzisa amandla e-elastic emthonjeni ongenazintsimbi ukwenza ukutywina kwe-axial ngokuzenzekelayo ukuze ivelufa engezantsi ikwimeko evaliweyo; imisebenzi yokuvula nokuvala yenziwa ngendlela yolawulo.
Xa amandla angalinganiyo angaphandle evuselelwa, intwasahlobo yangaphakathi kunye nesiqu sevalve sinokubangela, ngaloo ndlela kunqunyulwe umbhobho weoyile ngaphakathi kwe-10S, kuqinisekiswe ukhuseleko lwendawo ephakathi emotweni, ukuthintela ukuvuza, ucinezelo kunye nokudubula; ukukhusela izihlobo zomqhubi, iimpahla ezisemotweni, kunye nokunye okunxulumene ngaphandle kwemoto Ipropathi kunye nokhuseleko lwebhayoloji!
Ixesha Post: Aug-03-2020
Ummandla woxinaniso weWang Ji Industrial, iSuining County, iSixeko saseXuzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China